တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့် မတ် ၂ ရက်အစား အခြားရက်သို့ေ?? - Yangon Media Group
တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့် မတ် ၂ ရက်အစား အခြားရက်သို့ေ??
တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့် မတ် ၂ ရက်အစား အခြားရက်သို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးရန်ရည်ရွယ်ပြီး ထောင်နှင့်ချီသောလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားများက စီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြသည်။ မတ် ၂ ရက်က လှိုင်သာယာ မြို့နယ်အတွင်း စီတန်းလှည့်လည်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး လှိုင်သာယာမြို့ နယ် စက်မှုဇုန်ဘောလုံးကွင်းတွင် တောင်သူလယ်သမားနေ့အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါစီတန်းလှည့်လည်မှုနှင့် အခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုး ရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ ချုပ်(AFFM)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (CTUM)၊ လူမှုရေးမိတ် ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ”ဒီလိုတောင်သူလယ်သမား နေ့အခမ်းအနားပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က လယ်ယာကဏ္ဍပြန်လည် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လယ်သမားတွေရဲ့ အခက်အခဲလို အပ်ချက်တွေ သက်ဆိုင်ရာကသိရှိ စေဖို့၊ နောက်တစ်ချက်က အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ တောင်သူလယ်သမားနေ့ မတ် ၂ ရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီး အခြားရက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (AFFM)မှ အဖွဲ့ဝင် မခင်စုစုလှိုင်က ပြောသည်။
အဆိုပါစီတန်းလှည့်လည်မှုကို ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးအတိုင်း လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ဘောလုံးကွင်းအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လယ်ယာမြေဥပဒေပြင်ဆင်ပေး ရေး၊ လယ်ယာကဏ္ဍတိုးတက်ရေး၊ လယ်သမားများသွေးစည်းညီ ညွတ်ရေးစသည့် ကြွေးကြော်သံများကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းအခမ်းအနားတွင် စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (AFFM)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်း ဆွေက ”မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တဲ့ တောင်သူလယ်သမား နေ့ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ မတ် ၂ ရက်အစား လယ်သမားထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုတင်ပြချင်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ AFFM အနေဖြင့်လည်း တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို ယခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကာ လယ်သမားများ လမ်းလျှောက်ကြိုဆိုဂုဏ်ပြု ခြင်းအပြင် တောင်သူလယ်သမား နေ့အခမ်းအနားများကိုပါပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တိုင်လာပယ်ရီက “Madea” ဇာတ်ရုပ်မှာ မပါဝင်တော့တဲ့ အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု စတင်ဖြစ်ပေါ်၊ ဧပြီလတွင် ကျေးရွာပေါင်း ၆ဝ ကေ?
အိန္ဒိယတွင် မီးရှူးမီးပန်း စက်ရုံ မီးလောင်ပေါက်ကွဲ ခုနစ်ဦးသေ၊ ကိုးဦး ဒဏ်ရာရ